Lungiselela uVavanyo loVavanyo lwakho lokuFunda
Ziziphi izakhono zakho zokunciphisa ? Ngaba ufuna enye inkcazo? Ewe, yenza! Imiba yokuqonda yokufunda yeemviwo ezininzi eziyimfuneko iza kubuza imibuzo engabonakaliyo - abo bayakucela ukuba uphawule, okanye wenze uqikelelo olufundwayo, malunga nomxholo wesigatshana-kunye nemibandela ephakamileyo malunga nombono oyintloko , injongo yombhali kunye nesigama kwisimo .
Ootitshala, zikhululeke ukuphrinta ezi zi-PDF ezilandelayo ukuze wenze lula ukuzifundela eklasini:
I-Inference Practice 3 Worksheet | I-Inference Practice 3 Phendula inkcazelo
Ekufunyaneni Kutholakala Unetyala Lobuqu
Wazalelwa ngo-1778, wafa ngo-1803; waba yinkokeli ye-United States yama-Irish, kwaye ngo-1803 ikhokelela ekukhuphukeni okungaphumeleli eDublin; ukubalekela ezintabeni waza wabuyela eDublin ukuba athathe ikhefu lomyeni wakhe, uSara Curran, intombi yomlobi, kwaye wabanjwa waza waxhonywa.
AMAKOSI AMANJE: -Ithetha ntoni na ukuba kutheni ukuba isigwebo sokufa akufanele sichazwe kum ngokwemithetho? Andikho nto yokuthethayo inokutshintshela ukumisela kwakho ngaphambili, okanye ukuba iya kuba yinto yokuthetha nayo nayiphi na imbono ekunciphiseni kwesi sigwebo olapha ukubiza, kwaye kufuneka ndihlale. Kodwa ndinento yokuba ndiyintoni na into endiyithandayo ngaphezu kobomi, kwaye niyisebenzeleni (njengoko kwakunjalo), iofisi yakho kwiimeko zangoku kweli lizwe elixinzeleleyo) ukutshabalalisa. Ndinezinto ezininzi zokuthi kutheni idumela lam lifanele lihlangulwe kumthwalo wecala lokumangalela kunye ne-calumny ebekwe kuyo. Andicingi ukuba, uhleli apho ukhona, iingqondo zakho zinokuba zikhululekile ekungcoleni njengokufumana ingcamango encinane kwinto endiyithethayo-andinalo ithemba lokuba ndiyakwazi ukumisa isandi sam esifubeni senkundla kwaye i-trammeled njengokuba kunjalo-ndiyathanda kuphela, kwaye yinto endiyilindeleyo, ukuba ubukhosi bakho bunokubandezeleka ukuba uhlasele phantsi iimemori zakho ezingenasicatshulwa yimimoya engcolileyo yobundlobongela, de kube yifumana iindawo zokungenisa izihambi ukuze zikhusele kwiqhwithi apho okwangoku iqhutywe khona.
Ngaba bekuphela nje ukuba ndihlupheke emva kokugwetywa inetyala lakho inkundla, ndimele ndiqubude, ndize ndihlangabezane nexesha elizayo elinde ngaphandle kokukhononda; kodwa isivakalisi somthetho esilungisa umzimba wam kummangaleli, ngaba, ngokubulungiseleli balo mthetho, baya kusebenza ngokuqinisekileyo kwabo ukuthumela umlingiswa wam ukuba aphephe-kuba kufuneka ube netyala kwindawo ethile: nokuba kukho kwisigwebo senkundla okanye le ntlekele, i-posterity kufuneka imisele. Indoda kwimi imeko yam, amakhosi am, ayifumana kuphela ubunzima benkcitho, kunye namandla olawulo phezu kwengqondo eyonakalisile okanye eyayiyithintela, kodwa ubunzima bokungabikho komkhethe: uyafa, kodwa inkumbulo yakhe iphila. Ukuze andiyi kutshabalala kwam, ukuze iphile ngabantu bam, ndibamba eli thuba lokuba ndizithembele kwamanye amacala axelwe kum. Xa umoya wam uya kugxinwa kwichweba elinobubele; xa umthunzi wam sele ujoyine amaqhawe alawo maqhawe abulawa ngamarhafa achithe igazi labo kwi-scaffold nakwintsimi, ekukhuseleni ilizwe labo kunye nobuhle, eli yithemba lam: Ndiyathanda ukuba inkumbulo yam kunye negama linyamekele abo Ndisindise, ngelixa ndikhangele phantsi ngokukhawuleza kwintshatyalalo yeso rhu lumente onobungqina obuxhasa ubukhosi bayo ngokunyeliswa koPhezukonke-obonakalisa igunya lawo phezu kwendoda phezu kwezilwanyana zasehlathini-ezibeka umntu kumntakwabo, kwaye ziphakamisa isandla sakhe egameni likaThixo emlonyeni womnye umntu okholwayo okanye ongathandabuzekiyo kumncinci okanye ophantsi ngaphantsi komgangatho ka rhu lumente-urhulumente oqhutyelwa ubundlobongela ngeentandane kunye neinyembezi zabahlolokazi uyenzile.
Ndibhenela kuThixo ongacacanga-ndiyafunga ngetrone yezulu, ngaphambi kokuba ndiveze kungekudala-ngegazi labazali abathandekayo abaye bahamba phambi kwam-ukuba ukuziphatha kwam kukuye kuyo yonke ingozi kwaye zonke iinjongo zam, zilawulwa kuphela ngeenkolelo endithe ndayithethayo, kwaye akukho mnye umboniso, kunoko. ukunyanga kwabo, kunye nokukhululwa kwelizwe lam ngenxa yokunyanzeliswa kobuninzi abangaphantsi kobuntu phantsi kwexesha elide kwaye libekezeleke kakhulu; kwaye ndithembele kwaye ngokuqinisekileyo ndithemba ukuba, isilo sasendle kunye nesibindi njengokuba singabonakala, kusekho umanyano kunye namandla e-Ireland ukufeza le shishini elihle. Kule nto ndithetha ngokuzithemba kolwazi olunzulu, kunye nenduduzo ekwazisa loo ntembelo. Musa ukucinga, bamakhosi, nditsho oku kukunyaniseka kokuncinci ukunika ukungaxhamli kokukhawuleza; Indoda engazange ikhulise ilizwi layo ukuthetha ubuxoki, ayiyi kuba yingozi ngomlingani wayo ngokufaka ubungqina bamanga kwisifundo esibaluleke kakhulu kwilizwe lakhe, kwaye kwimeko efana nale. Ewe, amakhosi am, indoda engathandanga ukuba i-epitaph yakhe ibhalwe phantsi de ikhululwe ilizwe lakhe, ayiyi kushiya isikhali ngamandla okukhwele; okanye ukuzenzela ukuphazamisa ubungqina obunokuthi ulondoloze nakwindawo yokungcwaba.
Ndathi kwakhona, ukuba into endiyithethileyo, ayifumanekanga ukuba ubukhosi bakho, endiyifumeneyo nokuba ndikhwele-inkulumo yam yayingabantu bam ilizwe; ukuba kukho umntu wase-Ireland okhoyo, vumela amazwi am okugqibela amncede ngexesha lokuhlupheka kwakhe.
Ndandisoloko ndiyiqonda ukuba ngumsebenzi wejaji xa intolongo inetyala, ukuvakalisa isigwebo somthetho; Ndiye ndaqonda ukuba ngamanye amaxesha abagwebi bacinga ukuba ngumsebenzi wabo wokuva ngomonde, nokuthetha nabantu; ukukhuthaza ixhoba le mithetho, nokunikezela ngexabiso lentlonipho yeengcamango zakhe ezithintekayo kulo mthetho-mthetho, othe wafunyanwa unetyala: ukuba ijaji iye yacinga ukuba kuyimfuneko ukuba enze oko, Akungabazeki-kodwa phi inkululeko eqhayisayo yamaziko akho, apho kukungakhethi, ukungabi namkhethe, nobumnene beenkundla zakho zobulungisa, ukuba ungohlwayo olubi, lowo umgaqo-nkqubo wakho, kunye nobulungisa obungenasicoceko, uza kuzisa ezandleni zomenzi womsebenzi, akavumelekanga ukuba achaze iinjongo zakhe ngokunyanisekileyo nangenene, kwaye aqinisekise imigaqo awayeyisebenzisayo?
Amakhosi am, inokuba yinxalenye yenkqubo yobulungisa obushushu, ukukhothamela ingqondo yomntu ngokuthotywa kwintlonelo ye-scaffold; kodwa kunzima kum kunokuba neentloni, okanye izinto ezihlaselayo, kuya kuba yintloni yeengxelo ezinjalo ezingenasisiseko njengoko zibekwe phezu kwam enkundleni: wena, inkosi yam [iNkosi uNorbury], uyigweba, ; Ndiyindoda, nawe uyindoda; ngokuguqulwa kwamandla, sinokutshintsha indawo, tho asizange sitshintshe abalinganiswa; ukuba ndimi kwibhar yeli nkundla, kwaye ningalindeli ukuba ndiyintoni impawu zam, yiyiphi i-farce yakho yobulungisa? Ukuba ndimi kule bar kwaye ndingalindeli udidi lwam, unokuqhaqhazela njani ukuba uyilumkele? Ngaba isivakalisi sokufa esingaphantsi komgaqo wakho ongenakulinganiswa nomzimba wam, sigxeke ulwimi lwam ukuba lucele kwaye idumela lam liyihlazo? Umbulali wakho unokuhlaziya ixesha lobomi bam, kodwa ngelixa ndikhoyo andiyi kuyeka ukungqinisisa isimilo sam kunye neenjongo ezivela kwiindawo zakho zokubamba; kwaye njengendoda enegama elidlula ubomi, ndiya kusebenzisa ngokugqithiseleyo loo bomi ngokwenza ubulungisa kuleso sidima esiza kuphila emva kwam, kwaye yiyiphi ifa endingayishiya kulabo ndibazukisayo nothando, kwaye mna ndiqhayiya ukuba ndibhubhise. Njengamadoda, nkosi yam, kufuneka sibonakale ngosuku olukhulu kwinkundla enye, kwaye kuya kuthi ke ihlale isetyenziswe kuzo zonke iintliziyo ukubonisa ihlabathi elidibeneyo elibandakanyekayo kwizenzo ezintle, okanye ziqhutywe zizizathu ezintle- ngabacinezeli bam belizwe okanye mna?
Ndiyalelwa ukuba ngumthunywa waseFransi! Umthunywa waseFransi! Kwaye nawuphi na umphumo? Kutyholwa ukuba ndifuna ukuthengisa ukuzimela kwelizwe lam! Kwaye nawuphi na umphumo? Ngaba le nto yayiyinjongo yam? Ingaba yile mimoya apho isigqeba sobulungisa sivumelanisa ukungqubuzana? Hayi, andinguye umthunywa; kwaye isifuba sam kwakukubekwa indawo phakathi kwabahlanguli belizwe lam-kungekhona ngamandla, nangenzuzo, kodwa ngozuko lwempumelelo! Thengisa ukuzimela kwam ilizwe kwiFransi! Kwaye yintoni? Ingaba kukho ukutshintsha kwamakhosi? Hayi! Kodwa ngenxa yesifiso! Ewe ilizwe lam, ngaba isifiso sobuqu esinokubangela kum? Ukuba bekube ngumphefumlo wam izenzo, ngaba andinakuyifumana imfundo kunye nenhlanhla, ngezinga kunye nokuqwalaselwa kwentsapho yam, ndibeke phakathi kweqhayiya kubacinezeli bam? Ilizwe lam liyizithixo; kuyo yonke into endiyithandayo; kwaye ngenxa yoko, ngoku ndinika ubomi bam. Thixo! Hayi, nkosi yam; Ndenza njengomntu wase-Ireland, enqwenela ukuhambisa ilizwe lam kwidyokhwe yongxowanxanga lwangaphandle nolungapheliyo, kunye nejoka elingenakwiqumrhu lekhaya, eliyiqabane elihlangeneyo kunye nomenzi wecala kwi-parricide, ngenxa yokungabikho komntu okhoyo kunye ngaphandle kobuqaqawuli kunye nokungaziphathi kakuhle. Kwakunomnqweno wentliziyo yam ukunyusa ilizwe lam kwi-despotism.
Ndinqwenela ukubeka ukuzimela ngaphandle kokufikelela kwamandla emhlabeni; Ndanqwenela kukuphakamisa kwisikhululo sokuziphakamisa ehlabathini.
Ndinqwenela ukufumana ilizwe lam isiqiniseko esasifumana iWashington eMelika. Ukufumana uncedo, oko, ngomzekelo walo, kubaluleke kakhulu njengobunzima bawo, uqeqesho, unomdla, ukhulelwe isayensi namava; oya kuqonda okulungileyo, kwaye agubungele iingongoma zesimo sethu. Baya kuza kuthi njengabantu abangaziwayo, basishiye sibe ngabahlobo, emva kokuhlanganyela kwiingozi zethu nokuphakamisa isigqibo sethu. Ezi zinto zam izinto-kungekhona ukufumana abaphathi bamatsha abatsha, kodwa ukuxosha abaxhasi bamandulo; Le yimi mbono yam, kwaye kuphela laba aba-Irishman. Kwakungenxa yezi ziphelo ndafuna uncedo eFransi; kuba iFransi, njengotshaba, ayiyi kuba nzima ngaphezu kotshaba olusezantsi esifubeni selizwe lam.
Makungabikho namnye umntu oqhayisayo, xa ndifile, undigxeke ngehlazo; Makungabikho mntu okhumbuzayo inkumbulo yam ngokukholelwa ukuba ndikwazi ukwenza nayiphi na isizathu kodwa ukuba inkululeko yam ilizwe kunye nokuzimela; okanye ukuba ndibe ngumbane onobuqhetseba bamandla kwixinzelelo okanye ubunzima belizwe lam. Ukumenyezelwa kworhulumente wesikhashana uthetha ngeembono zethu; akukho nkcazo inokutshutshiswa kuyo ukusuka ekubhekiseleleni kubomvu okanye ukuhlaselwa ekhaya, okanye ukuthobela, ukuthotywa, okanye ukukhohlisa okuvela phesheya; Andizange ndifake kumcindezeli wangaphandle ngenxa yesizathu esifanayo sokuba ndingamelana nomcindezeli wangaphandle nakwikhaya; kwisidima senkululeko endiya kulwa nayo emngceleni welizwe lam, kwaye intshaba yalo kufuneka ingene kuphela ngokudlula isidumbu sam esingenamntu. Ndinguye, ohlala ngaphandle kwelizwe lam, kwaye ngubani oye wandibeka engozini yecinezeli nomlindi obukeleyo, kunye nokugqithwa kwengcwaba, kuphela ukunika abantu bam ilizwe amalungelo abo, kunye nelizwe lam ukuzimela kwakhe, kwaye kufuneka ilayishwe nge-calumny, kwaye ingavumelekanga okanye ayibuyise-hayi, maye!
Ukuba imimoya yabafileyo abaqhelekileyo ithatha inxaxheba kwiinkxalabo kunye neenkxalabo zabathandekayo kubo kubomi bemihla-oh, nantoni na emthunzini ohlonishwayo wobawo ohambayo, jonga phantsi ngokuhlolisisa ukuziphatha kwonyana wakho osizi; kwaye ubone ukuba ndikhange ndizuke emva kweminye imigaqo yokuziphatha kunye nokuthanda ubutyebi, oko bekukunyamekela ukuba ungene engqondweni yam yolutsha, kwaye ngoku ndiyintonikela ngoku ubomi bam!
Amakhosi am, awuphelelwa yimonde ngenxa yomnikelo-igazi olifunayo alinakunqandwa yizinto eziphazamisayo ezizungeze ixhoba lakho; ijikeleza ngokufudumele kwaye ingaphiliki, ngeendlela uThixo azidalileyo ngenjongo ezintle, kodwa ozimisele ukutshabalalisa, ngenjongo enzima kangaka, ukuba zikhala ezulwini. Yiba nomonde! Ndinamagama ambalwa okuthethileyo. Ndiya ethuneni lam elibandayo nelinen: isibane sam sokuphila siya kucima; uhlanga lwam lubaleka: ingcwaba livula ukundinceda, kwaye ndizongena esifubeni sayo! Ndine sicelo esisodwa sokuba ndibuze xa ndishiya kweli hlabathi-yintando yokuthula kwayo! Makungabikho mntu obhala i-epitaph yam: kuba kungekho mntu owaziyo iinjongo zam, uqiniseke ngokuqinisekileyo, makangabandakanyi ukubandlulula okanye ukungazi. Masihambe kunye nam ekuphumleni nasekuxolweni, kwaye ingcwaba lam lihlala lingabhalwanga, kude kube ngamanye amaxesha, kunye namanye amadoda, angenza ubulungisa kumntu wam; xa ilizwe lam lihamba phakathi kweentlanga zomhlaba, ngoko, kwaye kude kube ngoko, vumela i-epitaph yam ibhalwe. Ndenze.
1. Yiyiphi enye yeengxelo ezilandelayo malunga noRobert Emmet oza kuxhaswa ngokubhekiselele kwindinyana?
A. Wayengumntakwabo, ekulungele ukufa ngenxa yakhe.
B. Wayengumratshi, ehlazisa ilizwe lakhe.
C. Wayengumqambimanga, uhlalutya abantu.
D. Wayeyindoda, efuna ukuzukiswa.
2. Ngokusekelwe kwingcaciso kumhlathi wesibili, umntu unokuthi ukuba urhulumente ngexesha likaRobert Emmet liyilo:
A. ku buthathaka.
3. Ingakwazi ukuthetha ngokucacileyo kwintetho kaRobert Emmet enokukhathazeka kakhulu ngale nto emva kokufa kwakhe:
A. ungagqiba umsebenzi wokufumana inkululeko ye-Ireland.
B. ukushiya emva komfazi omncinci nomntwana omncinci ukuzimela.
C. ebonakaliswa njengengqungquthela ngabantu abangazange baqonde izizathu zakhe.
D. i-epitaph engabonakaliyo malunga nendima ayenayo ekuhlaleni kwabantu baseUnited Irish.
4. Ingacatshulwa ngokucacileyo kwinqanaba likaRobert Emmet elikholelwa ukuba intsebenziswano neFransi:
A. uncede ufumane ulawulo loorhulumente ukuba uzuze uEmmet.
B. uchithe abalawuli be-Ireland abahlukumezayo ukukhulula iIreland.
C. cima yonke umsebenzi ayeyenzile ukukhulula iIreland.
D. ugweba ukuba afe ngenxa yokunyaniseka.
5. Ngokusekelwe kwingcaciso kwiphepha, ithoni kaRobert Emmet yayingabonakalisa ukuba:
Indlela yokufunda kwiVavanyo kwiintsuku ezintlanu
Iintlobo ezine zeContext Clues
Uyakuqonda njani amaPercentile
Inkqubo yoLawulo loLawulo lweManzi yaseKhmer
Ukuqonda Ukuvukela Okukhulu kunye nokutshabalaliswa kweNdlu yesiBini
Yintoni okanye ngubani oyiCantor?
Iinqwenkwezi kunye neGesi Crash kwiGalaxy kwiSelesian Tsunami
Ukuhlaziywa kwe-Yamaha PSR-E423
Iincwadi ezibalulekileyo zeMathala
I-Francis Marion University Admissions
Ziziphi iilizwe eziManyano weYurophu?
Indlela yokuphucula ukuPhathwa kweeClassi ngeRoutines esebenzayo
Amaza eTropical: Iphutha lezityalo ezivela eAfrika
'INkosi yaseLear': i-Albany kunye neConwall
Konke malunga neNkcubeko yeNtsebenzo
Iimpawu ezi-10 zezilwanyana omele uzi
I-Aces ye-Cup ye-Ryder: Zingaphi i-Holes-In-One, kwaye ngubani owenza okokuqala?
Iingcebiso zoMzimba onoMzimba noQoqosho
I-Low Low Riders-NLR
Izinto Ezifanele Uzazi Ngoqeqesho lwe-IT
Amalungelo okuGundla Ngaphantsi koMongameli George W. Bush